कति छौ जनार्दन शर्मा प्रभाकरजस्ता ?
देशका विपन्न, सिमान्तकृत जनताका छोराछोरीलाई अभिभावकत्व ग्रहण गरेका नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले १२ बालबालिकालाई संरक्षण दिएका रहेछन् । उनी बेला बेलामा उनीहरुलाई भेट्न यसरी जाँदा रहेछन् । यो हो नि नेतृत्व ।
देशमा ७ सय ६१ सरकार छन् । ३५ हजार ९ सय ३४ जनप्रतिनिधि छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत जनप्रतिनिधि, मन्त्रीहरु हुनेखाने बर्गका छन् । जसले १० लाखदेखि १० करोडसम्म खर्च गरेर चुनाव जितेका छन्, उनीहरु हुनेखाने बर्गका नै हुन् ।
ती सबैले १ देखि १०० जनासम्मका बालबालिकालाई अभिभाकत्व लिने हो भने कति बालबालिकाले शिक्षा पाउन सक्छन् ? यस प्रकारको उदाहरणीय काम गरेर जनार्दन शर्मा प्रभाकरले देखाइदिएका छन् । अरु नेताले पनि त्यस्तो सुकर्म गरुन् ।
भारतमा बालबालिकामात्र होइन, गाउँ, टोल नै पनि संरक्षकत्व लिने प्रचलन छ । विकास गर्ने यो नयाँ तरिका नेपालमा पनि प्रवेश गरेको छ । राम्रो सुरुआत हो यो, यस प्रकारको सुरुआतले शिक्षामा विकास हुनेछ, शिक्षा भएपछि देश विकास हुन्छ ।
सांसदहरु ६ करोडसम्म विकास बजेट बोकेर ठेकेदार बनेका छन् । दशैं खर्चसमेत कर्मचारीले जसरी खाएका छन् । नैतिकवानलाई इसारा काफी छ, नैतिकहीन हुने हो भने भालुलाई पुराण सुनाएर के काम, भैंसीलाई बिन बजाएर के अर्थ रह्यो र ?